AutoCAD 2016. Dhammaadka shatiyada joogtada ah. - Geofumadas
Luulyo, 2015 AutoCAD-AutoDesk
Sida isbeddelka dabiiciga ah ee adduun-weynaha, isku-xidhka iyo ku dhawaad ​​horumar aan la saadaalin karin, softiweerku wuxuu ku joogsadaa inuu noqdo badeeco feerka wuxuuna noqonayaa adeeg. AutoDesk ma aha marka laga reebo sida aan horeyba ula aragnay Adobe, Bentley Systems, Corel, si aan u magacowno dhowr.
AutoDesk ayaa ku dhawaaqday in sanadkaan 2015 uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee laysanka joogtada ah lagu iibsan karo. Marka, haddaba, qof kasta oo iibsada liisanka wuxuu sameyn doonaa lacag bille ama sanadle ah isagoo xaq u leh inuu helo marinka u dambeeyay iyo adeegyo dheeri ah, iyadoo kuxiran inta la bixinayo.
Qiimaha AutoCAD LT
Dhanka qiimaha, ikhtiyaar xun looma arko, iyadoo la tixgelinayo in seddexdii sanoba mar nooc kasta oo AutoCAD ay ku xaddidan tahay is beddelka qaabka DWG. Arrintaas, haddii qof doonayo inuu iibsado AutoCAD LT, waxay ku bixin karaan rukumad saddex sano ah, 360 dollars sanadkii, wadarta guud ee 1,080 saddexda sano. Tan waxaa lagu arki karaa jadwalka soo socda, kaas oo si daacad ah oo aan cad u ahayn sida ay tahay marka loo eego bixinta lacagaha billaha ah oo sida muuqata qof uu iska bixin karo 540 guud ahaan sanadkii.
Qiimaha AutoCAD 2016
Xaaladdan oo kale, ruqsadaha sanadlaha ah waxay u baxaan 1,600 dollars haddii diiwaangelinta saddexda sano ah la doorto. Haddii qof doonayo ruqsad hal bil ah, qiimuhu waa $ 210 dollars.
Waa inaan qiimeyno sida ay faa'iido u leedahay. Arinta ku saabsan Nidaamyada 'Bentley Systems', xirmooyinka ay soo bandhigayaan waa kuwo soo jiidasho leh maxaa yeelay waxay u oggol yihiin marin u helista boggag dhammaystiran oo khadadka sida Injineerka, Dhirta, Adeegga, iwm. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la adeegsanayo softiweerkaas ma ahan mid soo jiidasho leh, maaddaama wareegga nolosha ee alaabooyinka ay sii dheereeyaan. Arintaas, yaa ku jira gacmihiisa Microstation V8 ee sanadka 2002, wax dhib ah malahan maxaa yeelay qaabka DGN wuxuu qaadanayaa sanado 14 inuu lamid noqdo. Sidaa darteed dadku waxay u boodaan noocyada cusub ee wareegga ee illaa 6 iyo 8 sano, marka hagaajinta xad-dhaafka ah ee noocyada cusub ay adag tahay in la xakameeyo.
Waxaa suuragal ah inay soo jiidato duruufaha suuqa haatan jira, oo ay jiraan xilliyo leh mashruucyo waa weyn, kuwaasoo soconaya dhowr bilood, taasoo ka dhigeysa mid soo jiidasho leh in lagu daro kharashyada mashruucaas kirada shatiyada, haddii aan soo wici karno sidan, halkii aad ka iibsan lahayd liisamo badan oo joogto ah oo hadhow aan laga khasaarin.
Xaqiiqdu waxay tahay in aysan jirin dib u laabasho, ma jiraan wax ka hadhay laakiin waa la qabsadaa isbeddel oo hela gargaarada.
Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa bixiyaha deegaanka, ama dukaanka internetka AutoDesk
Post Previous«Previous koorsooyinka GIS 9 janjeedha maamulka khayraadka dabiiciga ah
Post Next maps Web soo nooleeyo cartography taariikhigaNext »
4 Jawaab "AutoCAD 2016. Dhamaysta liisanka joogtada ah. "
hello yaa iiga sheegi kara liisanka AutoCAD ee joogtada ah
Weli waxaan shaki ku jiraa haddii ay yihiin ruqsado sharci.
Waa inaad saxdaa lambarka sirta ah ee ay ku xayeysiinayaan.
Maxaad ka fekereysaa boggan oo iibiya ilaa $ 60 -> https://latiendadelaslicencias.com/licencias-autocad/licencia-de-3-anos-de-autodesk-autocad-2018-windows-7810.html
Waxaan ku fekerayaa inaan iibsado hal laakiin ma aaminaayo nafsadeyda.